अग्निपीडितले भनेः गाँस, बाँस, कपास चाहियो मुख्यमन्त्रीज्यू ! - kaligandaki Khabar
अग्निपीडितले भनेः गाँस, बाँस, कपास चाहियो मुख्यमन्त्रीज्यू !
कर्णाली, १ मङ्सिर । गत कात्तिक २९ गते मध्य राति सदरमुकाम गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी भयो । आगलागीबाट त्यहाँका २१ घर खरानी बने । करोडौँको धनमाल क्षति भयो । घर जलेर नष्ट भएपछि करिब १५० भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए ।
त्यही समस्यालाई तत्काल सम्बोधनका लागि मङ्गलबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही राहत लिएर मुगु जाने तयारी गरे पनि प्राविधिक कारण जानु सक्नुभएन ।
आज बिहान ८ः३० बजे भने ३०० थान कम्बल, एक÷एक सय थान स्वीटर र ज्याकेट, ७० केजीको २१ थान टेण्ट लिएर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारको टोली सदरमुकाम गमगढी पुग्यो ।
पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले सुर्खेतबाट लिएको राहत वितरण गर्यो । निकै जाडो बढेको मङ्सिरको समयमा बास, कपास र गाँस नै सकिने गरी क्षति बेहोरेका अग्निपीडित प्रदेश सरकारको टोली त्यहाँ पुग्दा चिसोले थरथर कामिरहेका थिए । सरकार त्यहाँ पुगेपछि निकै आशा र भरोसाका साथ केही पाउने ध्याउन्नमा पीडित लामबद्ध भए ।
मुख्यमन्त्री शाहीसहितको टोली त्यहाँ पुगेर पीडित सबैको अवस्था बुझ्न खोज्दा पीडितबीच केहीबेर रुवाबासी नै चल्यो । धनमालसहित घर पूर्णरूपले जलेका परिवारहरुले रुँदै भने, “यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा सबै जलेर खरानी भयो । हिजोदेखि हामी सुकुम्बासी भइसक्यौँ । अब जतिसक्दो छिटो गाँस, बास र कपास चाहियो, मुख्यमन्त्रीज्यू १
मुख्यमन्त्री शाहीसहित नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही, प्रदेशसभा सदस्य झोवा विक, प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यसहितको प्रदेश सरकारको टोली मुगु पुगेर आजै राजधानी सुर्खेत फर्केको छ ।
प्रकाशित मिति :मंसिर १, २०७८ बुधबार - २१:१७:१३ बजे